Heshiis Niyad jab & Qoomamo ku ridaya difaacayaasha dastuurka – Mudug.com
Heshiishka wuxuu hakad iyo ka fiirsi gelinaya qoraalkii Midowga Musharrixiinta u gudbiyay Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay, kuna codsadeen dhismaha Golaha Qaranka. Heshiiska wuxuu midowga musharrixiinta ka hor istaagay inay bannaanbax dambe ka sameeyaan Magaalada Muqdisho haddii aysan dowladda federaalka ka helin oggolaansho, taaso dhaawac weyn ku ah xaqa xorriyada bannaanbaxa Shacabka Soomaaliyeed. Dowladda Federaalka waxay ku guuleystay meelmarka fikirka awood sheegashada oo oranaya “DF waa dileysa, waa dhaawaceysa, waa xireysa, guryahana waa ka dumineysa muwaadiniinta sameysa bannaanbax aysan raalli ka aheyn. Sidaa darted, danta muwaadiniinta waxay ku jirtaa inaysan sameyn bannanbax aysan dowladda raalli ka aheyn.”
Waa maangaabnimo in Madaxweyne Sicid Deni lagu jaa’ifeeyo inuu rabo dagaal ka dhaca Muqdisho. Madaxweyne Sicid Deni waa caddeeyay inuusan rabin dagaal ka dhaca Muqdisho, wuxuuna qirtay in DF ka wado DG Puntland fidno, musuqmaasuq, qas iyo kicin bulsho. Sidaa darted, ma jirto sabab Madaxweyne Sicid Deni loo tuhmo, looga afminshaareeyo. Af buuxa ayuu ku sheegay inuu u adeegayo, difaacayo, ilaalinayo danaha Puntland, taaso ku ah waajib dastuuri ah.
DIKTATOORIYAD CUSUB MA LAGU BEDELI KARO WAR-SAXAAFADEED AAN FALCELIN LAHAYN